Videogiochi kutenderera ne Cloud Gaming di Stadia, Geforce Zvino, Playstation Zvino ulator Emulator.online ▷ 🥇
Kusvikira nguva pfupi yadarika, kuti utambe mitambo yaunofarira yemavhidhiyo, waifanira kutenga koni yemutambo kana kumisikidza PC inodhura yemitambo, uye kufambirana nemifananidzo inowedzera, taifanira kugara tichigadzirisa komputa kana kutenga imwe. nyowani nyowani ingangoita makore ese 3-4. Asi nekukurumidza Internet kubatana, nzira nyowani yekutamba mitambo yemavhidhiyo yatanga kubata: iyo mitambo yemakore.
Pfungwa yemitambo yegore haina kunyatsosiyana neyemhando yepamusoro mitambo yepamhepo inowanikwa paInternet, nemusiyano wekuti kuburikidza neaya mapuratifomu emakore zvinogoneka nhasi. tamba kunyangwe epamberi mitambo yemavhidhiyo (saCyberPunk 2077), iyo inowanzoda PC ine yakatsaurwa mifananidzo kadhi kana koni senge Playstation 4 kana 5. Kunyangwe uchishandisa yakajairwa PC uye pasina kutenga chero chakakosha chishandisoNaizvozvo, inogona kutambwa isina mabhuroko uye neyakajeka mhando, nekuti zviwanikwa zvinodiwa kumhanya mutambo zvinopihwa nemaseva ane simba ari kure, kwatinobatanidza neInternet kuti tigamuchire mutambo weaudio / vhidhiyo uye titumire iyo yekuraira yekuisa.
Muchirongwa ichi tinokuratidza sei kutamba online pasina koni kana PC yemitambo kutora mukana weiyo mitambo yekutamba yegore inowanikwa muItari uye inowanika nyore kunyangwe iine kubatana kweInternet kusingashande zvakanyanya (zviripachena, isu tichagara tichifanira kudzivirira kunonoka kubatana kana ADSL kubatana, ikozvino isina kukodzera zvachose kune mazhinji masevhisi anopiwa mukati mambure).
VERENGA ZVIMWE: Maitiro ekutamba mitambo yePC paTV
Maitiro ekutamba mitambo yegore
Sezvambotaurwa musumo, isu tinogona chete kutamba mugore kana tiine discrete internet yekubatanidza - pane angangoita ese masevhisi ichi ndicho chete chinodiwa (kunze kweGeForce Ikozvino) se zvinoitika pahwindo redu rwizi rwakamanikidzwa inogona kubata chero PC kunyangwe iine makore manomwe kana kupfuura pamafudzi ayo. Mushure mekuona izvo zvinodikanwa, isu tinokuratidza iwo masevhisi aunogona kushandisa muItari kumitambo yegore uye izvo zvekushandisa zvinokurudzirwa kushandisa kuita kuti chiitiko chemitambo chizadzikise zvechokwadi.
Sisitimu uye network zvinoda
Zvemitambo yegore, isu tinoda internet landline ine chipenga kunyoreswa (saka hapana kubhadhara-se-iwe-kuenda kunyoreswa kana waya dzisina waya) dzinokwanisa kuzadzisa zvinotevera zvinodiwa:
Dhawunorodha mhanyisa: anosvika gumi nemashanu megabits pasekondi (15 Mbps)
Pakira kumhanya: anosvika gumi nemashanu megabits pasekondi (2 Mbps)
Whistle: pasi pezana ms
Kuti tiwane mhedzisiro, tinodzivisa kushandisa kweWi-Fi kubatana pakati pePC nemodem uye tinosarudza Ethernet tambo yekubatanidza: kana modem iri kure kwazvo nePC yatinoda kutamba nayo, tinogonakana kubheja Powerline kubatana kana pa5 GHz yeWi-Fi inodzokorora kuvandudza kugadzikana uye kubatanidza kumhanya. Kuti uedze internet yako yekubatanidza imba uye uone kana yakakodzera mutambo wemitambo, tinokurudzira kuti umhanye bvunzo yekumhanya muchinyorwa chedu "ADSL uye Fibre Bvunzo: Internet Speed ​​Inoyerwa Sei?", kwazvinokwana kupururudza pasi peji uye nekuchinya Start bhatani bhatani kuti uzive nekukurumidza kana isu tinosangana nezvinodiwa zvasimbiswa pamusoro
Cloud mitambo inowanikwa muItari
Kana yedu Internet yekubatanidza yakwana kutora mukana wemitambo yegore, tinogona kusarudza kubva kune akati wandei masevhisi kuti titange kutamba online ipapo pasina koni uye pasina PC yemitambo.
Yekutanga sevhisi yatinokurudzira iwe kuedza ndeye Google Stadia, inowanikwa kubva pawebhusaiti yepamutemo uye inomhanya neGoogle Chrome browser (kuti iiswe pakombuta yedu).
Nebasa iri, zvinokwana kuve neakaundi yeGoogle uye kunyorera kune kunyoreswa kwemwedzi kwe € 9,99 kuti utambe nekukurumidza mitambo yakawanda, kunyangwe ichangoburwa, ine mhando yepamusoro yekutapurirana uye mhinduro yekuraira padanho repamusoro ( Kutenda kumaseva eGoogle akazvipira).
Kana isu tichida kuunza Google Stadia mumba yekutandarira uye tamba mitambo paTV, tinogona kufunga nezve kutenga Stadia Premiere Edition bundle, iyo inopa stadia wifi mutungamiriri Ndicho Chromecast Ultra kutamba mugore pane chero TV.
ONA: Kana iwe uchida edza Stadia mahara uye chengetedza kuti yako internet yekubatanidza inomhanyisa zvakakwana kutenderera mitambo yemavhidhiyo, unogona kuzviita pasina kupa kiredhiti kadhi. Iwe unongoda kunyoresa kuaccount account uye usati wapedza kunyoresa, shandisa sarudzo kuti uedze sevhisi kwemaminitsi makumi matatu. Tevere, taura imwe yemitambo yemahara yakapihwa naStadia Pro uye tanga kutamba kuti uone kana ichishanda mushe paPC yako.
Imwe sevhisi yatinogona kushandisa kumitambo yegore ndeye GeForce IZVOZVI, Inoshandiswa neNVIDIA uye inowanikwa pawebhusaiti yepamutemo.
Nekunyorera kusevhisheni uye kurodha pasi chairo application pane yedu kifaa, isu tinokwanisa kutamba zvemahara pasina miganho kweawa rimwe chete pazuva, asi nekudzadzikana kuwana (isu tichafanirwa kutsvaga nzvimbo yemahara pane maseva); Kuti utambe mitambo yese nekukasira, pasina kumirira uye neyakajeka mhando (pamwe nekumisikidzwa kweNVIDIA Ray Tracing), ingo nyorera kunyorera kwe € 27,45, inobhadharwa mwedzi mitanhatu. Kugona kutamba pane zvimwewo zvidiki zvinodikanwa zvePC iri kushandiswa, nekuti iko kushandisa kunoshandisa chikamu chidiki chehurongwa zviwanikwa: kutamba zvakanaka zvinokwana kuve nePC ine 6GB ye RAM uye kadhi revhidhiyo rinotsigira DirectX 4, senge yakaonekwa pane yepamutemo zvinodiwa peji. Kuti titambe zvisina hanya ipapo, tinogona kufunga kushandisa NVIDIA SHIELD TV, HDMI dongle yakagadzirira kushandisa nemitambo yegore uye inowanikwa paAmazon isingasviki € 200.
Rimwe basa rakanaka ratingaedze kumitambo yegore ndeye PlayStation izvozvi, Yakapihwa naSony uye inowanikwa kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Nebasa iri tinokwanisa kutamba mazita anowanikwa paPS4 nePS5 zvakare kubva kuPc, zvese zvatinofanirwa kuita kurodha pasi chaiyo kunyorera kweWindows PC, kupinda neakaundi yeSony uye kubhadhara kunyoreswa kwemwedzi (€ 9,99 pa mwedzi). Kana isu tichida kutamba mugore mukamuri yekutandarira pamberi peTV, tinogona chaizvo kutora mukana wePS Zvino paPS4 Pro kana PS5, kudzivirira kutenga mitambo nekutamba Pamhepo nemhando yepamusoro.
VERENGA ZVIMWE: Yakanakisa JoyPads yePC
Nokusarudza rimwe remitambo yemitambo yegore yakaratidzwa pamusoro, tichakwanisa kutamba online pasina koni uye tisina kumisikidza PC yekutamba (inodhura kwazvo), kubhadhara mari yakatarwa pamwedzi, kana kutenga mamwe mazita ezvedu kuunganidzwa. (paGoogle Stadia). Mamwe masevhisi zvakare akasununguka zvachose, asi ane nguva uye bandwidth kukwana, saka hazviwanzo kugona kutamba sezvaunoona nemabasa akabhadharwa. Kana Internet yedu ichibvumidza iyo, ngatipei mitambo yegore kuyedza, sezvo izvozvi maseva uye zvinongedzo zvinoshandiswa zvinoshandiswa kukura kuita ruzivo rwese rwekutamba online, tichidzivirira matambudziko ese ane chekuita nezvinhu zvekare ( vhidhiyo kadhi isiri kushanda kana PC isina kuita zvakanaka).
Kana isu tichida zvemitambo yemavhidhiyo, usapotsa runyorwa rwe yakanakisa 60 emahara mitambo yePc.